Xisbiga KULMIYE Oo Magacaabay Gudoomiye Ku-xigeenka Saddexaad ee Xisbiga – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – War-saxaafadeed maanta uu soo saaray xisbiga KULMIYE oo uu saxeexan yahay gudoomiyaha xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa uu ku magacaabay gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga.
War-saxaafadeedkan ayaa u dhignaa sidan:
“Kadib markaan arkay xilka Guddoomiye-ku-xigeenka Saddexaad ee xisbiga KULMIYE ee bannaannaaday ansixintii Shirweynihii 3-aad ee xisbiga KULMIYE kadib.
In Xuseen Aadan Cadde – Laga bilaabo maanta, January 15th, 2017, uu ahaado Guddoomiye-ku-xigeenka saddexaad (3-aad) ee xisbiga KULMIYE.
NB: Magacaabista xilka Guddoomiye-ku-xigeenimo ee kor ku xusan waxa ay dhaqangali doontaa ansixinta shirka Golaha Dhexe ee ugu horeeya kadib. Xil gudasho wacan”.